Bhumibol Adulyadej (1927-2016) (Thai:ภูมิพลอดุลยเดช)
Bhumibol Adulyadej (Thai: ภูมิพล อดุลย เดช; RTGS: Phumiphon Adunyadet; Muuqaalka [pʰūː.mí.pstanceōn ʔā.dūn.jā.dèːt] (ku saabsan codkan maqal); ka eeg hoosta buuxda ee hoos ku qoran; 5 Diseembar 1927 - 13 Oktoobar 2016), oo lagu magacaabo King Bhumibol ee Great Great 1987,      wuxuu ahaa Boqortooyada sagaalaad ee Tayland oo ka soo jeeda Chakri oo ah Rama IX. Isaga oo tan iyo 9-kii Juun 1946 wuxuu ahaa, markii uu geeriyooday, madaxweynihii ugu dheeraa ee dowladdii adduunka,  Boqortooyada ugu dheer ee taariikhda Tayland iyo Boqortooyada ugu dheer ee boqortooyada ah waxay ku xukuntay oo kaliya qof weyn, 70 sano, 126 maalmood.  Intii uu xukunka hayey, waxaa loo adeegsaday wadar ahaan 30 ra'iisul-wasaare oo ka bilaabmay Pridi Banomyong oo ku dhameeyey Prayut Chan-o-cha. 
Forbes lagu qiyaasay hantida Bhumibol - oo ay ku jiraan hantida iyo maalgelinta ay maamusho Xafiiska Hantida Xoolaha, oo ah hay'ad gaar ah oo aan ahayn mid gaar ah ama dawladeed (hantidii ay maamulaysay Baanka) waxay leedahay taajir ahaan xarun ahaan, ma aha boqortooyada shakhsi ahaan ) - inuu noqdo US $ 30 bilyan sannadkii 2010, waxana uu hoggaaminayay liiska magacyadda "abaalmarinta ugu qaalisan dunida" laga soo bilaabo 2008 ilaa 2013.    Bishii Maajo 2014, hantida Bhumibol ayaa mar kale lagu magacaabay US $ 30 bilyan. 
Kadib 2006, Bhumibol waxa uu la kulmay caafimaad xumo waxaana uu muddo dheer ku qaatay cusbitaalka Siriraj, halkaas oo uu geeriyooday 13kii Oktoobar 2016-kii. Wuxuu guud ahaan aad u qadariyay dadweynaha Thailand   - dad badan ayaa xitaa u arkay isaga oo u dhow ilaahnimada. 15]  Dad fara badan oo siyaasadeed iyo muwaadiniin reer Thai ah oo dhaleeceeyay Boqorka ama hay'adda boqortooyada ayaa inta badan ku khasabtay in ay masaafuriyaan ama ay ku rafaadsadaan xabsiyo badan.     Hase yeeshee kiisas badan ayaa la tuuray ka hor inta aan la sii deyn ama ugu dambeyntii la siiyay cafis ahaan Boqortooyada. Cabbiraadiisa waxaa la qabtay 26 Oktoobar 2017 xiliga hudheellada boqortooyada ee Sanam Luang. 
Khudbadiisa, Sharciga Quraanka Kariimka ah, ma uusan wadaagin sumcadiisa, taas oo keentay in welwel laga qabo in Boqortooyada Talyaanigu ay luminayso sharaf iyo saameyn ku salaysan xukunka kama dambaysta ah  
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhumibol_Adulyadej&oldid=179742"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Sebteembar 2018, marka ee eheed 10:58.